UApple umangalela iSwatch ngokusebenzisa ibheji yayo njenge "Phawula ngokwahlukileyo" | Ndisuka mac
UApple umangalela uSwatch ngokusebenzisa ibheji yakhe njengo "Phawula ngokwahlukileyo"
Inkqubo entsha yezomthetho apho iApple ibhaptizwa khona. Ngeli xesha, kunye nenkampani yaseYurophu, yokunxiba ibheji yohlobo kwi-90s. Iwotshi ebukele iSwitzerland Swatch Kusenokwenzeka ukuba isebenzisa elo binzana eliyintsomi lelona phulo liphumelelayo lokupapasha kwimbali yee-90s, Ukwenza umdlalo wamagama kwaye ukutshintshiselana ngesiqhelo "Cinga ngokwahlukileyo" kwe "Phawula ngokwahlukileyo", Ukucacisa ngokucacileyo kwinkampani yaseNyakatho Melika.
Kuyabonakala ukuba yinkampani yaseSwitzerland isebenzisa le mibhalo kwezinye iiwotshi zayo ezithengiswayo ukuthatha inxaxheba kwimpumelelo yeApple kwelo phulo lokuthengisa. Ukungqina oku, iApple iyakudinga ukubonisa ukuba ubuncinci i-50% yabathengi badibanisa "Cinga ngokwahlukileyo" kunye nophawu lweApple.
Isikhalazo, esifakwe ngokusesikweni kwiveki ephelileyo, sifundwa yiNkundla yoLawulo yaseSwitzerland. Ukuze uphumelele ekuphikiseni isikhalazo, u-Apple kufuneka ayibonise loo nto ubuncinci isiqingatha sabantu siyadibana isiqubulo kunye nephulo lakhe kwi-90s.
Ukuphendula kwizityholo, i Swatch CEO uNick Hayek watsho njalo Nakuphi na ukufana phakathi kwala maphulo mabini kwenzeka ngengozi. UHayek uthi:
» "Phawula ngokungafaniyo" ineengcambu zayo kwiphulo leSwatch kwii-80s, ebiphethe ibinzana elithi "Soloko uhlukile, usoloko umtsha" (okanye uhlala uhlukile, uhlala umtsha).
Okwangoku, Swatch Sebenzisa le bheji ukwahlula iimodeli zakho Bellamy, iwotshi eyenziwe nge-quartz eyakhelwe ngaphakathi ukusebenza kwe-NFC yokuhlawula. Ngapha koko, ngo-2015 Swatch Ingene ngokupheleleyo kwintlawulo yi-NFC, igqithile kulo nyaka i-Apple kwintengiso ye-Apple Watch kunye nokusetyenziswa kweApple Pay.
Olu ngquzulwano ayingombambano wokuqala phakathi kwezi nkampani zimbini. Ngaphandle kokusebenzisana kunye ngaxa lithile (bekukho nokuqikelela kunye nombutho wabo ukwenza iApple Watch ngo-2014), bajongiwe zezinye izilogeni ezifana "Enye Enye Into", okanye nokuba igama ekugqibeleni libizwa ngokuba yiApple Watch, kuba IWatch ixelwe ngu Swatch ngokujonga kakhulu njengophawu lwakho lwentengiso «iSwatch ».
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » UApple umangalela uSwatch ngokusebenzisa ibheji yakhe njengo "Phawula ngokwahlukileyo"
Isicelo esitsha sokuguqulela kwiMac, uMguquli kunye nesichazi-magama
Umenzi wesikrini kunye neBitMedic AntiVirus, iyathengiswa ixesha elincinci